Fahatezerana an-dalambe antsy Zombie: manafika mpamily fiara London ny jiolahin'ny bisikileta amin'ny antoandro
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Fahatezerana an-dalambe antsy Zombie: manafika mpamily fiara London ny jiolahin'ny bisikileta amin'ny antoandro
Nalaza be ny sary dashcam dashcam an'ny mpitaingina bisikileta iray nandrahona mpamily fiara tany Londres tamin'ny antsy zombie goavambe ary nanandrana namaky ny varavarankelin'ny fiara tamin'ny andro antoandro.
Ny sarimihetsika CCTV dia mampiseho an'io lehilahy io nandaka Volkswagen Polo manga teo amin'ny làlana atsimon'i London izay be loatra alohan'ny nisintomany ilay volo lehibe, toa 10 sm mahery ny halavany, mazàna ampiasaina amin'ny fivelomana na fihazana, ary fikasana hanafika ny 19 taona mpamily lava.
Nanafika ny fiara ilay bisikileta rehefa avy nisintona mafy teo alohany. Nanamboatra ny antsy izy, nipaoka ny fiara ary nikorisa teo am-baravarankely raha nibolisatra tao anaty kosa ny mpamily. Taorian'ny nifindran'ilay mpitondra bisikileta teny an-dafin'ny fiara ary novakivakiny ny iray amin'ireo varavarankely dia voatery nitsambikina ny mpamily ary namonjy ny ainy.
Vahoaka marobe no niambina tamina horohoro rehefa nanohy ny fanafihany tsy nisy hatak'andro ilay jiolahimboto mahery setra raha nanery tao anaty ilay mpamily, toa tsy afaka nivily ilay fiara.
Tsy mbola nisy ny fisamborana taorian'ny tranga ny Alarobia hariva, hoy i Scotland Yard.
Hoy ny mpitondra tenin'ny vehivavy iray: “Nantsoina ny polisy ny alarobia 30 Mey tokony ho tamin'ny 5 ora hariva ny tatitra momba ny famonoan'ny lehilahy ny fitaratry ny fiara tao London Road, Croydon. Nanatrika ny tompon'andraikitra ary nanamafy fa ny mpamily ny fiara dia nanatona lehilahy iray manana antsy izay namaky ny varavarankeliny.
“Ilay niharam-boina, tovolahy 19 taona teo am-piezahana handositra dia nifandona tamina fiara iray hafa, nivoaka an-tongotra. Nanaraka azy avy eo ity olon-dratsy ity. Niverina tany amin'ny fiarany ilay niharam-boina rehefa avy nanao vava ny olon-dratsy. Tsy nisy ny naratra voalaza. ”
Mirongatra ny asan-dahalo satria asiana tsatok'antsy iray manerana an'i Royaume-Uni ny tarehimarika vaovao. Farafahakeliny olona 37 no voatsatoka antsy - ary 62 no matin'ny olona rehetra - tao an-tanànan'i Londres hatramin'ny fiandohan'ny taona.